Ilmo soo rididda - 1177 Vårdguiden
Abort - somaliska
Ilmo soo rididda
Ilmo soo rididda micnaheedu waa in la joojiyo uur-qaadidda. Dalka Iswiidhan waxaynu ku haysanaa xorriyada Ilmo soo rididda sida hadba ku xusan sharciga Ilmo soo rididda. Qofka uurka qaaday ayaa go’aanka Ilmo soo rididda iska leh. Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo sameeyo Ilmo soo rididda. Uur-qaadidda waxaa la joojiyaa iyadoo la adeegsanayo kiniinyo ama iyadoo qallitaan yar lagu dhaqaaqo.
Dhammaan dadka samaynaya Ilmo soo rididda waxay haystaan sababo kala duwan. Micno ma leh sababta ka dambeysa go’aanka, dadka oo dhan xaq isku mid ah ayay u leeyihiin Ilmo soo rididda. Iyadoon fiiro-gaar la siin sababta iyo iyadoon fiiro-gaar la siin haddii go’aanka Ilmo soo rididda loo dareemo mid fudud ama adag, waxaaa fiican in la helo taageero wada-hadal ku salaysan. Tani waxay khuseysaa haweeneyda uurka leh iyo qofka uureeyay.
Ilmo soo rididda ma keento in ay adkato in uur-qaadidda la yeesho mustaqbalka.
Qofka uurka qaaday ayaa go’aanka iska leh
Qofka uurka leh ayaa mar kasta go’aanka Ilmo soo rididda ama dhalmada iskaleh, tani waxay ku xusan tahay sharciga Ilmo soo rididda. Adigu waxaad kale oo aad xaq u leedahay inaad is-baddeshid xilliga aad doonto ka hor Ilmo soo rididda. Waxaaa fiicnaan lahayd inaad qofka aad uur-qaadidda wada leedihiin aad ka wada hadashaan sida aad doonaysid inaad samayso. Haddii ay suurtagal tahay waxaaa kale oo fiican in la gaadho go’aan wada-jir ah. Laakin mararka qaarkood tani suurtagal maaha oo markasi qofka uurka leh ayaa go’aaminaya.
Adiga oo ah qofka aan loo oggolayn go’aaminta
Sida hadba ku xusan sharciga mar kastaba, qofka uurka leh ayaa go’aanka Ilmo soo rididda iskaleh. In ka qayb qaadashada iyo go’aaminta ku saabsan Ilmo soo rididda aan laga mid ahaan waxay ahaan kartaa dareen adag. Adigu waxaaad lahaan kartaa dareemo la mid ah qofka uur-qaadidda leh. Adigu waxaad xitaa xaq ku leedahay inaad ka hadasho dareemadaada ku saabsan Ilmo soo rididda. Warbixin dheeraad ka aqriso halka ay ku qoran tahay taageerada wada-hadalka ku salaysan.
Goorma ayaad samayn kartaa Ilmo soo rididda?
Tiriska uur-qaadidda wuxuu ka soo bilaawdaa maalintii ugu horeeysay ee caadadi ugu dambeysay. Lagama soo bilaabo maalinta bacriminta. Ilaa iyo toddobaadka 18-aad ee uur-qaadidda waxaad xaq u leedahay samaynta Ilmo soo rididda iyadoo aan loo baahnayn in qof loo sheego sababta aad doonaysid inaad u samayso arintan.
Ka dib toddobaadka 18-aad ee uur-qaadidda waa khasab in Maamulka Dhexe ee Arrimaha Bulshadu [Socialstyrelsen] u bixiyo oggolaanshaha Ilmo soo rididda. Markasi waa inay jiraan sababo gaar u ah Ilmo soo rididda. Tusaale sababta waxay noqon kartaa inaad leedahay dhibaato ah khamriga ama maandooriye, caafimaaddarrada nafsiga, cillada uurjiifka ama u lee yahay dhawaac halis ah. Xitaa da’du waxay ahaan kartaa sabab gaar ah. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka caawinaya codsashada oggolaanshada.
Maamulka Dhexe ee Arrimaha Bulshada ma bixiyo oggolaanshada Ilmo soo rididda, haddii ilmaha u dhalmada kaddib noolan karo. Sidaas darteed toddobaadka 22-aad waa toddobaadka ugu dambeeya ee Ilmo soo rididda.
Haddii aad uur leedahay kana fikirayso Ilmo soo rididda, waxaad la xidhiidhaysaa rugta Ilmo soo rididda ama rugta isbitaalka haweenka. Halkasi waxaad ka helaysaa ballanta baaritaanka si loo hubiyo intay leeg tahay mudada aad uurka lahayd. Waxaad ka wada hadlaysaan xitaa qaabka Ilmo soo rididda ee adiga kugu fiican. Waxaa lagu siin doonaa taageero wada-hadal ku salaysan, taasoo tusaale ahaan la yeelan doonto qof la-taliye ah ama dhakhtarka cilmi-nafsiga.
Ka dib sida diyaargarowyadu u dhacaan waxay ku xidhan tahay qaabka Ilmo soo rididda ee la isticmaali doono. Mararka qaarkood ma lagu oggola cunto iyo cabitaan maalinta iyo habeenka ka horeeya Ilmo soo rididda.
Sidan ayaa Ilmo soo rididda u dhacdaa
Ilmo soo rididda waxaa loo samayn karaa qaabab kala duwan. Qaabka la isticmaalayo waxay ku xiran tahay intay leeg tahay mudada aad uur-qaadidda lahayd. Waxaa intaasi sii dheer in isbitaalada kala duwan ay leeyihiin nidaamyo kala duwan. Badi ahaan saamayn ayaa ku yeelan kartaa.
Ilmo soo rididda iyadoo daawooyin la adeegsanaayo
Dhinaca Ilmo soo rididda xili hore ah, ka hor toddobaadka 9, waxaa caadi ah in Ilmo soo rididda awgeed daawooyin la adeegsado. Ilmo soo rididda awgeed daawooyin la adeegsado waxaa marka hore daawo laga siinayaa rugta Ilmo soo rididda. Daawadan ayaa bilaabaysa Ilmo soo rididda. Dumarka qaarkood waxay bilaabayaan in iyagoo gurigooda ku sugan u dhiig ka yimaado. Laba maalmood ka dib ayaad isbitaalka dib ugu soo noqonaysaa. Halkasi waxaa lagaa siinayaa daawo keenaysa in ilmo-galeenku isku-uruuro, badi ahaan waa daawo siilka la geliyo. Ka dib waxaad ku hakanaysaa waaxda isbitaalka, dhowr saacadood ka dib waxaa dhacaysa dhiigid wadata kuusyo, waxaana sidaas ku ciribtirmaayo wixii uurka ku jiray. Tani xanuun ayay keeni kartaa laakiin haddii xaaladu sidaasi tahay waxaa lagu siinayaa xanuun -jebin oo xilli dambe isla maalintaas ayaad tegi kartaa gurigaaga.
Mararka qaarkood waxaad qaybta labaad ee kiniinyada ku qaadan kartaa guriga, waxaa lagu magacaabo Ilmo soo rididda guriga. Si loo sameeyo Ilmo soo rididda guriga ah waa khasab in mar kastaba kula joogo qof weyn.
Toddobaadyada ka dambeeya Ilmo soo rididda waa caadi in dhiig ka yimaado qiyaasti sida caadada oo kale ah ama laga yaabee in yar ka badan. Dhowr toddobaad ka dib Ilmo soo rididda waxaad la kulmaysaa ama la xiriiraysaa dhakhtarka haweenka ama ummuliso. Xilliga hubintan dambe waxaad ka wada hadlaysaan sida Ilmo soo rididdai u dhacday oo waxaad samayn kartaa baaritaanka uur-qaadidda.
Faa’iidada Ilmo soo rididda daawooyinka ku salaysan waa qaab jidhka u dhib yaraynaayo. Qaabkan waa suurtagal in la isticmaalo dhammaan mudada la oggol yahay Ilmo soo rididda. Laakiin isbitaalada oo dhan ma isticmaalaan Ilmo soo rididda daawooyinka inta u dhaxaysa toddobaadyada uur-qaadidda ee 9 iyo 12. Rugahan waxaa taas baddelkeeda laga sameeyaa qallitaanka Ilmo soo rididda awgeed la adeegsado xilliga toddobaadyadaas.
Qallitaanka Ilmo soo rididda awgeed la adeegsado
Qallitaanka Ilmo soo rididda awgeed la adeegsado waxaa la isticmaali karaa ilaa iyo toddobaadka uur-qaadidda ee 12 ama 13, laakiin badi ahaan maaha wakhtiga aad u horeeya ee xilliga uur-qaadidda. Waa qallitaan aad u fudud. Mararka qaarkood waxaa ugu horeyn lagu siinayaa daawo la gelinayo siilka oo jilcinaysa dhuunta ilmo-galeenka. Ka dib waa lagu suuxinayaa oo dhakhtarka ayaa qalab gelinaya ilmo-galeenka, qalabkan waxaa ku xiran qalabka wax soo nuuga. Tartiib ayaa ilmo-galeenka looga soo nuugayaa uurjiifka iyo mandheerta . Qallitaankan oo dhani wuxu qaataa ilaa laba miridh, isu geyn Ilmo soo rididda waxay qaadataa qiyaasti 20 miridh. Ka dib waxaad joogaysaa rugtan dhowr saacadood si aad u nasato. Dhiigbaxa ilmo soo rididda qallitaanka ku salaysan wuu ka yar yahay kan daawooyinka loo adeegsado.
Ilmo soo rididda daahsan
Ka dib toddobaadka 12 ama 13 waxaa markastaba la sameeyaa Ilmo soo rididda qaabka daawooyinka ku salaysan, laakiin markasi Ilmo soo rididda way sii muddo dheeraataa oo waxaad isbitaalka joogaysaa wakhti dheer. Way kala duwan tahay intay leeg tahay wakhtiga ay qaadanayso Ilmo soo rididda. Laga soo bilaabo dhowr saacadood ilaa dhowr maalmood, laakiin dadka badankooda waxay ku qaadataa ilaa iyo maalin iyo habeen. Mararka qaarkood waa in dhakhtarku hawsha ku soo dhamaystiro xoqida ilmo-galeenka, waa haddii qaybo mandheerta ku hartay.
Ilmo soo rididda marka aad ka yar tahay 18 sano
Xitaa haddii aad ka yar tahay 18 sano adiga ayaa go’aaminaya haddii aad doonayso inaad Ilmaha iska soo rido. Shaqaalaha rugta Ilmo soo rididda waxay tixgeliyaan waajibka xajinta sirta xirfada, loo ma oggola inay qofna uga sheekeeyaan booqashadaada. Laakiin haddii aad ka yar tahay 18 sano waxaa badi ahaan shaqaaluhu ku taliyaan, in qof weyn oo qoyska ka tirsan aad wargeliso in ilmaha aad iska soo riday. Waxaa fiican inaad haysato qof ku noqon kara taageero ka hor iyo ka dib ilmo soo rididda.
Haddii aanay suurtagal ahayn inaad qoyskaaga uga sheekayso inaad samaynayso Ilmo soo rididda, waxaa u sheegi kartaa qof kale oo weyn oo aad ku kalsoon tahay. Wuxuu qofku noqon karaa qof qaraabo ama qof kale oo aad kugu dhow, qof la-taliye ah ama kalkalisada caafimaadka ee dugsiga. Kolba aad ku sii dhawaato da’da 18 sano, waxaa sii yaraanayso waxaa dadka waaweyn ee mas’uulka ka ahi ay xaq u leeyihiin inay ka ogaadaan xiriiryadaada aad xarumaha daryeelka caafimaadka la leedahay.
Haddii gebi-ahaanba aanay suurtagal ahayn inaad qoyskaaga wargeliso, tusaale ay sabab u tahay inaad dhibaato la kulmi karto, waxay shaqaalaha caafimaadku la hadli karaan qof kale oo weyn. Markasi waxaad caawimaad ka heli kartaa qof la-taliye ah ama qof ku taageera oo kale.
Haddii shaqaalaha caafimaadka ay ka fikirayaan inay la xiriiraan qof weyn oo mas’uul ka ah, adiga ayaa ka hor lagu wargelinayaa.
Ilmo soo rididda kaddib
Ilmo soo rididda waxaad u noolaan kartaa si caadi ah, laakiin waxaa fiicnaan lahayd in la nasto maalin. Maalmaha ugu horeeya waxaad dareemi kartaa xanuun fudud, qiyaasti sida xanuun ka caadada. Toddobaadyada ka dambeeya Ilmo soo rididda, waxaa caaadi ah in dhiig yimaado, qiyaasti sida caadada ama laga yaabee ka sii yara badan. Mudada dhiigbaxa way kala duwan tahay waa hadba qofka ilmaha iska soo riday. Heerka dhiigbaxa waa hadba nooc Ilmo soo rididda ee aad soo martay.
Waxaa kale oo Ilmo soo rididda ka dib jirta khatar korodhsan oo ah dhinaca infekshan. Si loo yareeyo khatarta infekshan waa inaad ka taxadarto wasmo siilka ah ilaa iyo inta aad dhiigbaxaysoo ama leedahay dheecaano bunni ah. Ka taxadar duubka caadada loo isticmaalo ama koobka caadada oo qubeyso taas oo baddel u ah dabaasha sixniga maydhashada.
Caadadu badi ahaan waxay dib u soo noqotaa 4 ilaa 6 toddobaad ka dib.
Wada-hadal taageero ku salaysan ka hor iyo ka dib Ilmo soo rididda
Iyadoo aan fiiro-gaar la siin sababta aad u samaysay Ilmo soo rididda iyo iyadoo aan fiiro-gaar la siin haddii go’aanku fududaa ama adka waxaa fiicnaan karta in la helo caawimaad si loo xasiliyo fikirka. Adigu laba xilli ayaad u baahnaan kartaa inaad samayso wada-hadal oo taageero ku salaysan, marka ay ku hortaalo go’aanka Ilmo soo rididda iyo ka dib marka ay dhamaato Ilmo soo rididda. Tani waxay xitaa khuseysaa qofka haweeneyda uurka u yeelay.
Dumarka qaarkood waxay Ilmo soo rididda kadib dareemaan nyadjab. Kuwa kalena nefis ayay dareemaan. Mararka qaarkood waxay dareemaan dareemmo is-waydaarsan. Dareemadu waxay xitaa soo ifbixi karaan goor dambe.
Dumarka qaarkood waxay taageero ka helaan qof aad ugu dhow, laakiin waxaad wada-hadal taageero ku salaysan ka heli kartaa xarumaha daryeelka caafimaadka. Mararka qaarkood wuxuu qofku dareemi karaa dareen wanaag haddii arrintaan u kala sheekaysto qof khibrad u leh. Qofku wuxuu tusaale ahaan noqon karaa qof la-taliye ah ama dhakhtar cilmi-nafsiga ah oo jooga rugta Ilmo soo rididda ama ummuliso joogta rugta ummulisooyinka.
Haddii aad doonaysid inaad hesho taageerada wada-hadalka ku salaysan waxaad wakhti ka ballansanaysaa rugta Ilmo soo rididda. Talo-bixintani waa lacag la’aan. Waxaad heli kartaa taageerada wada-hadalka ku salaysan xitaa haddii wakhti dheer ay ka soo wareegtay xilligii Ilmo soo rididda.
Johanna Katz-Dalsgaard, Stockholm